Ungazisebenzisa kanjani izingcingo ze-WhatsApp | Kusuka kuLinux
Ungazisebenzisa kanjani izingcingo ze-WhatsApp
Iphasiwedi | | eziningana
Insizakalo yemiyalezo ephathekayo ethandwayo, WhatsApp, isiqalile ukwenza isici sokushaya samahhala sibe lula kubo bonke abasebenzisi bayo ku I-Android ne-iOS (enenguqulo 2.11.508 yohlelo lokusebenza). NgoLwesihlanu, Mashi 27, abasebenzisi abaningana babone lo msebenzi unikwe amandla kuma-smartphones abo futhi ngawo umjikelezo wezingcingo zezimemo waqala.
Izithombe-skrini zalesi sici esisha zivele kuReddit, nentshisekelo yokuthola ukusakazwa kwezingcingo zamahhala. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi ngezindleko ezingenangqondo (isebenzisa kuphela idatha futhi imahhala ngokuphelele uma usebenzisa inethiwekhi yamahhala noma i-wifi)
Ungazisebenzisa kanjani izingcingo ze-WhatsApp igxathu negxathu
Ungazisebenzisa kanjani izingcingo ze-WhatsApp por ukhaphethi
Kulesi sifundo sizobona ukuthi uzisebenzisa kanjani izingcingo zeWhatsApp.
Uma ungazi ukuthi ungasifaka kanjani lesi sici esisha, sicela ulandele lezi zinyathelo ezingezansi:
Izidingo ezincane zokufaka izingcingo ze-WhatsApp:
Uhlobo lwe-Android 2.1 noma ngaphezulu. Kuma-iPhones noma amanye amadivayisi we-iOS, inguqulo ye-beta 2.12.0.1 iyadingeka.
Ukuxhumeka okusebenzayo kwe-inthanethi.
Ungazivumela kanjani izingcingo ze-WhatsApp kubasebenzisi be-Android
Ukuze unike amandla lesi sici, amakhasimende we Android Kumele bavuselele uhlelo lokusebenza abalufakile kuma-smartphones abo ukuze babe nenguqulo yakamuva.
chofoza lapha ukulanda i inguqulo yakamuva yeWhatsapp, lapho ungashaya khona izingcingo.
Ngemuva kwalokho, i- izingcingo zamahhala ze-WhatsApp izokwenziwa isebenze, noma kunjalo cha izosebenza kuze kube isinyathelo esilandelayo.
Lapho uhlelo ngokwalo seluvuselelwe, kubalulekile ukuthola omunye umsebenzisi ovele ewujabulela lo msebenzi bese ubacela ukuthi basishayele.
I-WhatsApp ibeke lo mthetho wokwenza kusebenze ngesimemo sokugwema ukugcwalisa inethiwekhi.
Lokhu kuzokwenza kusebenze i- izingcingo zezwi kuWhatsApp ngokuqinisekile, okungukuthi, manje usungakwazi ukwenza izingcingo koxhumana nabo inqobo nje uma nobabili ninokuxhumeka kwe-inthanethi.
Khumbula izindleko zamakholi maqondana nezindleko zedatha:
Umzuzu owodwa wocingo lwe-WhatsApp uthatha cishe u-0,15 - 0,20 MB ngoxhumano lwe-3G. Lokhu kusho ukuthi ikholi yemizuzu emi-5 isebenzisa 1 MB. Kumele futhi ukhumbule ukuthi ngenethiwekhi ye-3G ikhwalithi ihloniphekile, hhayi ku-2G, lapho ukusetshenziswa kuphakeme kakhulu (0,35 MB ngomzuzu).
Kungakuhle ukweqa lesi sici uma ungenayo imali okungenani engu-1GB ngenyanga.
Futhi wena, usuvele ukujabuleleizingcingo zamahhala ze-WhatsApp? Unganqikazi ukubenza basebenze ngalokhu isifundo ngesinyathelo ngesinyathelo!
Ungaphuthelwa yindatshana yethu mayelana - >> Imikhonyovu enezingcingo zeWhatsApp
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Ungazisebenzisa kanjani izingcingo ze-WhatsApp
Uma ngifuna ukushayela i-lumia 625 yami
Angikwazi ukusebenzisa izingcingo ku-lumia 625 yami ngingayibuyekeza kanjani i-whatsapp yami
izingcingo ze-whatsapp ku-wp azisebenzi okwamanje ezenzelwe i-android yingoba awukwazi ukuyisebenzisa activ
dayana mendoza martinez kusho
Ngifuna izingcingo ku-whatsapp yami
Phendula i-dayana mendoza martinez
Kungenxa ye-IOS funda ukufunda
Funda ukufunda eyakho ngoba yenzelwe i-ios ne-android
Ukuze wenze Izingcingo zisebenze, Tshela Omunye Umuntu Obuyekeze i-WhatsApp ukuthi Akushayele Futhi Azivuselele Ngokuzenzakalelayo
u-gabriela garcia kusho
Phendula ku-gabriela garcia
Izingcingo azizange zibuyekezwe ku-My Lumia 630
kwenza Izinyanga ze-12
ngoba i-fuck abayifaki usuku kokuthunyelwe
Ungayifaka kanjani i-WhatsApp ku-PC yakho
Amafoni omakhalekhukhwini ayifanele